Positive လူနာအဖြစ် ဆေးရုံ၊ ကိုဗစ်စင်တာတွေမှာ သွားရောက်နေထိုင်ရမယ့်လူတွေအတွက် သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ဝေမျှပေးလာတဲ့ မောင် - Cele Connections
Positive လူနာအဖြစ် ဆေးရုံ၊ ကိုဗစ်စင်တာတွေမှာ သွားရောက်နေထိုင်ရမယ့်လူတွေအတွက် သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ဝေမျှပေးလာတဲ့ မောင်
သရုပ်ဆောင် မောင်ကတော့ အနုပညာလောကကနေ အနားယူခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာပြီဆိုပေမယ့် သူ့ရဲ့ချစ်သူ ရီရီပွင့်ဖြူနဲ့အတူတူ Vlog လေးတွေရိုက်ရင်း ပရိသတ်တွေနဲ့ ထိတွေ့နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မောင်ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေ ရပ်နားလိုက်ချိန်မှာတော့ သူ့လိုချင်တဲ့ ပညာရေးပန်းတိုင်တစ်ခုဆီ အရောက်သွားခဲ့ပြီး ဆရာဝန်တစ်ယောက်အဖြစ်လည်း ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ကို ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ မောင်က သူကိုယ်တိုင် Covid-19 လူနာအဖြစ် နေထိုင်ခဲ့ရစဉ်က အတွေ့အကြုံတွေကို အခုလိုပဲ မျှဝေပေးလာပါတယ်။
“ဒီစာလေးကတော့ ကိုဗစ် ဖြစ်ပြီး ဆေးရုံ သို့မဟုတ် ကုသရေးစင်တာမှာဖြစ်ဖြစ် ရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဧရာဝတီစင်တာမှာ ဆေးကုသခံခဲ့စဉ်က ကြုံတွေ့ရတာလေးတွေပါ။ တာဝန်ရှိသူတွေက အင်းတိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့အပေါ် လူနာတွေဘက်ကလည်း စည်းကမ်းလိုက်နာမှု့လေးတွေရှိမယ်ဆို ကူညီရာရောက်ပါတယ်။ – အစားအသောက်ကိစ္စ.. စင်တာတွေမှာ လူနာတွေကို တနေ့ ထမင်း၃နပ်အပြင် ရေသန့်နဲ့ မုန့်တွေပါ ပေးပါတယ်။ ထမင်းဆိုလည်း တစ်ယောက်စာကိုဝဝလင်လင်စားလို့ရအောင်လုံလောက်အောင်ပေးပါတယ်။ လူနာနဲ့ စေတနာဝန်ထမ်း တွေထိတွေ့မှု့နည်းအောင် အရှေ့စားပွဲပေါ်မှာပဲ လူအရေတွက်နဲ့ ချပေးခဲ့တာပါ။ အဲ့လိုအခါမျိုးမှာ ကိုယ့်တစ်ယောက်စာကိုပဲ ယူပေးစေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကဦးလို့ပဲဆိုပြီး လောဘနဲ့ နေ့ဖို့ညစာတွေပိုယူတဲ့အခါကျ နောက်လူတွေမရတာမျိုးဖြစ်ရပါတယ်။ အဲ့လိုအခါမျိုးတွေမှာဆို အပြင်ကလူတွေဆီထပ်တောင်းရ။ PPE တခါဝတ်ရ…နောက်တခါလာထက်ပေးရတာတွေဟာ တော်တော်ကို အလုပ်ပိုစေတယ်လို့မြင်မိပါတယ်။”
“- အမှိုက်ကိစ္စ.. Positive လူနာတွေဆီက ထွက်လာတဲ့အမှိုက်တွေက အန္တရာယ်အရမ်းများပါတယ်။ ဒါတွေကို စေတနာဝန်ထမ်းတွေကသိမ်းပေး ပြစ်ပေးရတာပါ။ အမှိုက်တွေကိုဖြစ်သလို ပစ်တာမျိုးမလုပ်ဘဲ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ထုတ်ပိုးပြီး ပစ်ပေးသင့်ပါတယ်။ maskတွေ၊ လက်အိတ်တွေ၊ စားကြွင်းစားကျန်ဆိုလည်း အဖုံးလေးသေချာပိတ်ပြီး အမှိုက်အိတ်နဲ့လုံအောင်ထုတ်ပိုးပြီး ပစ်ပေးမယ်ဆို သိမ်းရတဲ့တွေအတွက် အရမ်းကိုအဆင်ပြေမှာပါ။ – အညစ်အကြေးစွန့်တဲ့ကိစ္စ.. ကျွန်တော် အထဲမှာ မြင်တွေ့ခဲ့ရသလောက် အမျိုးသားတွေက ညဘက်ဆီးသွားချင်ရင် ရေသန့်ဘူးနဲ့အလွယ်သွားတတ်ကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စုပေါင်းအိမ်သာက အဆောင်ရဲ့အပြင်ဘက်အဝေးမှာရောက်နေလို့ပါ။ ဒါပေမယ့်စွန့်ပစ်တဲ့အခါမှာ အိမ်သာထဲမှာသေချာသွန်ပြီးဆေးကြောသင့်ပါတယ်။ အမှိုက်ထဲ ဆီးဘူးတွေပစ်တော့ သိမ်းရတဲ့သူတွေကို အားနာဖို့ကောင်းသလို မတော်တဆ မှောက်ကျ ဖိတ်ကျခဲ့ရင်လည်း တော်တော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်”
“- အခန်းရှင်းတဲ့ကိစ္စ.. ဘယ်သူကမှတာဝန်မပေးထားပေမယ့် ကိုယ်ပြန်တဲ့အခါ ကိုယ့်အခန်းလေးကိုလာခဲ့စဉ်ကအတိုင်း ပြန်ရှင်းပေးခဲ့မယ်ဆို တခြားသူတွေအတွက်အလုပ်ရှုတ်တော်တော်သက်သာသွားမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့တုန်းကတော့ ပြန်သွားတဲ့သူတွေရဲ့အခန်းတွေကို ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေစုရှင်းခဲ့ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ Volunteerတွေက PPEဝတ်ပြီးလာရှင်းရမှာပါ။ တယောက်ချင်းဆီက ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူတာကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ – လူနာချင်းရိုင်းပင်းခြင်းကိစ္စ.. ကိုဗစ်လူနာတွေမှာ လူနာစောင့်မရှိပါဘူး။ အားလုံးကိုယ်ထူကိုယ်ထပါပဲ။ အဲ့တော့နေကောင်းကျန်းမာနေတဲ့ သူက ဖျားနာနေတဲ့သူ မောနေတဲ့လူနာတွေကို ပြန်ကူညီပေးဖို့လိုပါတယ်။ အစိုးရကရော အလှူရှင်တွေကရော အကုန်ပူးပေါင်းပြီး ကိုဗစ်ကိုတိုက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာ လူနာတွေကလည်း ပါဝင်ပေးမှရမှာပါ။ ငါကလူနာပဲဆိုပြီ အပြစ်ထိုင်တင်ပြီး အခန့်သားနေလို့မရပါဘူး။ စည်းကမ်းလိုက်နာမှရပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကြီးအမြန်ဆုံးကိုဗစ်ဒဏ်ကနေကင်းဝေးနိုင်ပါစေ” ဆိုပြီး ပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Positive လူနာအဖွဈ ဆေးရုံ၊ ကိုဗဈစငျတာတှမှော သှားရောကျနထေိုငျရမယျ့လူတှအေတှကျ သူ့ရဲ့အတှအေ့ကွုံတှကေို ဝမြှေပေးလာတဲ့ မောငျ
သရုပျဆောငျ မောငျကတော့ အနုပညာလောကကနေ အနားယူခဲ့တာ နှဈပေါငျးအတျောကွာပွီဆိုပမေယျ့ သူ့ရဲ့ခဈြသူ ရီရီပှငျ့ဖွူနဲ့အတူတူ Vlog လေးတှရေိုကျရငျး ပရိသတျတှနေဲ့ ထိတှနေ့ဆေဲ ဖွဈပါတယျ။ မောငျကတော့ အနုပညာအလုပျတှေ ရပျနားလိုကျခြိနျမှာတော့ သူ့လိုခငျြတဲ့ ပညာရေးပနျးတိုငျတဈခုဆီ အရောကျသှားခဲ့ပွီး ဆရာဝနျတဈယောကျအဖွဈလညျး ဆေးကုသခှငျ့လိုငျစငျကို ပွနျလညျလြှောကျထားခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ မောငျက သူကိုယျတိုငျ Covid-19 လူနာအဖွဈ နထေိုငျခဲ့ရစဉျက အတှအေ့ကွုံတှကေို အခုလိုပဲ မြှဝပေေးလာပါတယျ။
“ဒီစာလေးကတော့ ကိုဗဈ ဖွဈပွီး ဆေးရုံ သို့မဟုတျ ကုသရေးစငျတာမှာဖွဈဖွဈ ရောကျနတေဲ့သူတှအေတှကျပါ။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ ဧရာဝတီစငျတာမှာ ဆေးကုသခံခဲ့စဉျက ကွုံတှရေ့တာလေးတှပေါ။ တာဝနျရှိသူတှကေ အငျးတိုကျအားတိုကျ ဆောငျရှကျပေးကွတဲ့အပျေါ လူနာတှဘေကျကလညျး စညျးကမျးလိုကျနာမှု့လေးတှရှေိမယျဆို ကူညီရာရောကျပါတယျ။ – အစားအသောကျကိစ်စ.. စငျတာတှမှော လူနာတှကေို တနေ့ ထမငျး၃နပျအပွငျ ရသေနျ့နဲ့ မုနျ့တှပေါ ပေးပါတယျ။ ထမငျးဆိုလညျး တဈယောကျစာကိုဝဝလငျလငျစားလို့ရအောငျလုံလောကျအောငျပေးပါတယျ။ လူနာနဲ့ စတေနာဝနျထမျး တှထေိတှမှေု့နညျးအောငျ အရှစေ့ားပှဲပျေါမှာပဲ လူအရတှေကျနဲ့ ခပြေးခဲ့တာပါ။ အဲ့လိုအခါမြိုးမှာ ကိုယျ့တဈယောကျစာကိုပဲ ယူပေးစခေငျြပါတယျ။ ကိုယျကဦးလို့ပဲဆိုပွီး လောဘနဲ့ နဖေို့ညစာတှပေိုယူတဲ့အခါကြ နောကျလူတှမေရတာမြိုးဖွဈရပါတယျ။ အဲ့လိုအခါမြိုးတှမှောဆို အပွငျကလူတှဆေီထပျတောငျးရ။ PPE တခါဝတျရ…နောကျတခါလာထကျပေးရတာတှဟော တျောတျောကို အလုပျပိုစတေယျလို့မွငျမိပါတယျ။”
“- အမှိုကျကိစ်စ.. Positive လူနာတှဆေီက ထှကျလာတဲ့အမှိုကျတှကေ အန်တရာယျအရမျးမြားပါတယျ။ ဒါတှကေို စတေနာဝနျထမျးတှကေသိမျးပေး ပွဈပေးရတာပါ။ အမှိုကျတှကေိုဖွဈသလို ပဈတာမြိုးမလုပျဘဲ သပျသပျရပျရပျထုတျပိုးပွီး ပဈပေးသငျ့ပါတယျ။ maskတှေ၊ လကျအိတျတှေ၊ စားကွှငျးစားကနျြဆိုလညျး အဖုံးလေးသခြောပိတျပွီး အမှိုကျအိတျနဲ့လုံအောငျထုတျပိုးပွီး ပဈပေးမယျဆို သိမျးရတဲ့တှအေတှကျ အရမျးကိုအဆငျပွမှောပါ။ – အညဈအကွေးစှနျ့တဲ့ကိစ်စ.. ကြှနျတျော အထဲမှာ မွငျတှခေဲ့ရသလောကျ အမြိုးသားတှကေ ညဘကျဆီးသှားခငျြရငျ ရသေနျ့ဘူးနဲ့အလှယျသှားတတျကွတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ စုပေါငျးအိမျသာက အဆောငျရဲ့အပွငျဘကျအဝေးမှာရောကျနလေို့ပါ။ ဒါပမေယျ့စှနျ့ပဈတဲ့အခါမှာ အိမျသာထဲမှာသခြောသှနျပွီးဆေးကွောသငျ့ပါတယျ။ အမှိုကျထဲ ဆီးဘူးတှပေဈတော့ သိမျးရတဲ့သူတှကေို အားနာဖို့ကောငျးသလို မတျောတဆ မှောကျကြ ဖိတျကခြဲ့ရငျလညျး တျောတျောစိတျပကျြစရာကောငျးပါတယျ”
“- အခနျးရှငျးတဲ့ကိစ်စ.. ဘယျသူကမှတာဝနျမပေးထားပမေယျ့ ကိုယျပွနျတဲ့အခါ ကိုယျ့အခနျးလေးကိုလာခဲ့စဉျကအတိုငျး ပွနျရှငျးပေးခဲ့မယျဆို တခွားသူတှအေတှကျအလုပျရှုတျတျောတျောသကျသာသှားမှာပါ။ ကြှနျတျောတို့တုနျးကတော့ ပွနျသှားတဲ့သူတှရေဲ့အခနျးတှကေို ကနျြခဲ့တဲ့သူတှစေုရှငျးခဲ့ပါတယျ။ မဟုတျရငျတော့ Volunteerတှကေ PPEဝတျပွီးလာရှငျးရမှာပါ။ တယောကျခငျြးဆီက ကိုယျ့တာဝနျကိုယျယူတာကတော့ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ – လူနာခငျြးရိုငျးပငျးခွငျးကိစ်စ.. ကိုဗဈလူနာတှမှော လူနာစောငျ့မရှိပါဘူး။ အားလုံးကိုယျထူကိုယျထပါပဲ။ အဲ့တော့နကေောငျးကနျြးမာနတေဲ့ သူက ဖြားနာနတေဲ့သူ မောနတေဲ့လူနာတှကေို ပွနျကူညီပေးဖို့လိုပါတယျ။ အစိုးရကရော အလှူရှငျတှကေရော အကုနျပူးပေါငျးပွီး ကိုဗဈကိုတိုကျထုတျတဲ့နရောမှာ လူနာတှကေလညျး ပါဝငျပေးမှရမှာပါ။ ငါကလူနာပဲဆိုပွီ အပွဈထိုငျတငျပွီး အခနျ့သားနလေို့မရပါဘူး။ စညျးကမျးလိုကျနာမှရပါမယျ။ မွနျမာနိုငျငံကွီးအမွနျဆုံးကိုဗဈဒဏျကနကေငျးဝေးနိုငျပါစေ” ဆိုပွီး ပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
မင်းသွေးရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သီချင်း MV လေးကို မင်းသွေးကွယ်လွန်ခြင်း (၂)နှစ်ပြည့်မှာ မျှဝေလာတဲ့ နေတိုး
ပရိသတ်တွေမျက်စိရှေ့မှာတင်ပဲ အရွယ်ရောက်လာခဲ့ပြီး ဒီကနေ့မှာ အသက် (၂၁) နှစ်တိတိပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီ ယွန်းယွန်း
သွေးသားမတော်စပ်ပေမယ့် သိတတ်လိမ္မာလွန်းတဲ့ ညီမလေးသွန်းဆက်ရဲ့ ဂါရဝပြုကန်တော့မှုကြောင့် ရင်ထဲမှာတောင်ငိုချင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်
နှင်းဆီမင်းသားတွေရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုတွေကို Private Closed Group ထဲမှာ သီးသန့်ဆုံတွေ့အားပေးလို့ရမယ့် အစီအစဉ်တစ်ခုကို ပြောပြလာတဲ့ နေတိုး